Zubayr Al-Muhaajir oo sheegay in Al Shabaab aysan diinta ku dhaqmin uuna ka baxsaday [Video]
January 21, 2020 - Written by Editor
Muqdisho:-Zubayr Al-Muhaajir oo ka mid ahaa Saraakiisha Ajnabiga ah ee ka mid ahaa Ururka Al-shabaab ayaa si rasmi ah u shaaciyey in uu ka baxsaday Hogaanka ururka Al-shabaab uuna hadda ku sugan yahay magaalada Muqdisho.
Wariyaasha ka howl gala magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa Halgan.net waxaa soo gaarsiiyeen cod iyo Video uu leeyahay Zubayr Al-Muhaajir Usbuucii la soo dhaafay balse howl wadeenada Halgan.net ayaa waxa ay wadeen baaritaan ku saabsan wax xaqiiqda ah ee ka jira in Zubayr Al-Muhaajiruu ka baxsaday ururka Al-shabaaab uuna isku dhiibay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Mareegta Halgan.net ayaa Zubayr Al-Muhaajir waxaa ay dhowr sano ka hor baahisay qoraalo uu leeyahay Zubayr Al-Muhaajir uuna dhaliil u soo jeedinayo hogaanka ururka Al-shabaab. Halkaan ka eeg qoraal ay Halgan.net 2013 ay ka qortay Zuber Al-Muhaajir
Hoos ka Dhagayso Zubayr Al-Muhaajir oo ka hadlaya in uu ka baxsafay Al-shabaab.
Dhinac kale idaacadda VOA ayaa maanta waxaa ay waraysi gaar ah la yeelatay Zubayr Al-Muhaajir oo ka mid noqday golaha shuurada ee Al-Shabaab waxaa uu sheegay in uu ka soo baxsaday al-shabaab.
Hoos ka Dhagayso waraysiga gaarka ah ee uu VOA siiyey Zubayr Al-Muhaajir.
Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Hogaanka ururka Al-shabaab oo ku saabsan in Zubeyr Al-muhaajiri uu ka baxsaday Al-shabaab uuna isku dhiibay dowladda Federaalka Soomaaliya ama uu ku sugan magaalada Muqdisho.